Cida aad u shaqayso waa in la ogeysiiyo oo ay ogolaato
Waad ka dhici kartaa kursiga laakiin taasi waa sida ay tahay: adigu ma go'aansan kartid naftaada inaad abaabusho aperitif goobtaada shaqada adigoon marka hore helin ruqsad laga helo loo shaqeeyahaaga.
Goobta shaqadu waa, mabda 'ahaan, kaas oo loogu talagalay waqtiga waxqabadka xirfadeed. Sidaa awgeed, goobta wax lagu cabbo, aalkolo leh ama aan ahayn, inta udhaxeysa asxaabta, inta lagu jiro ama saacadaha shaqada, laguma hayn karo goobaha xirfada. kaliya heshiis shaqo bixiyaha.
Tani waxay qiimeyn doontaa gaar ahaan sababta aad u codsatay, waqtiga aad rabto inaad la kulanto (goor dambe, subax, galab, galab) iyo cawaaqibka ka imaan kara howlaha xirfadeed ee adeegga ee noqon doona Jooji inta lagu jiro waqtigan ciidda ...
Miyaan ku samayn karaa xafiis xafiis ah? July 10th, 2021Tranquillus
READ Gargaarka safarka ee magdhowga naafada
horeBixinta gunnada Macron waxay furan tahay illaa Diseembar 31, 2020?
socdaMaaskaro ganacsiga ku jira: haddii la diido waa la ciqaabi doonaa
Gargaarka safarka ee magdhowga naafada